1Banks, Monique 1Du Preez, Jenny Boźena 1Evans, Philippa A 1Fali, Nompumelelo Winnifred 1Hunt, Sally Ann 1Laubscher, Emma Kate 1Mtirara, Zodwa 1Peter, Zola Welcome
2Feminism and literature 2Sex role in literature 2Women in literature 2Xhosa literature -- Research 1African fiction -- Women authors -- History and criticism 1Benjamin, Jessica 1Butler, Judith, 1956- 1Children's stories, English -- History and criticism 1Children's stories--History and criticism 1Elegiac poetry 1Enright, Anne, 1962- -- Criticism and interpretation 1Eroticism in literature 1Fairy tales 1Families -- Fiction 1Families in literature 1Feminism in literature 1Foucault, Michel, 1926-1984 1Gappah, Petina, 1971- -- Criticism and interpretation 1Gender nonconformity
6Masters 5MA 3Doctoral 2PhD 2text 1DPhil 1English
6English 1Isixhosa 1Xhosa, English
32020 12010 12011 12015 12016 12017 12018
- Banks, Monique
Subjects: Fairy tales , Gender identity in literature , Children's stories--History and criticism
Ukuzotywa kwabalinganiswa ababhinqileyo abaziintloko kwiidrama zolwimi lwesiXhosa bezotywa ngababhali abasini sobuduna kwakunye nabo babhinqileyo
Subjects: Xhosa literature -- Research , Gender identity in literature , Gender nonconformity , Women -- South Africa -- Drama
Identifier: http://hdl.handle.net/10948/18431 , http://vital.seals.ac.za8080/10948/26663 , vital:28645
Description: Eli phepha lithiywe “Ukuzotywa kwabalinganiswa ababhinqileyo, abazintloko kwidrama zolwimi lwesiXhosa, bezotywa ngababhali besini sobuduna nesini sobukhomokazi liza kube lijongene nendlela apho ababhali abasini esohlukileyo, abathi babazobe ngayo abalinganiswa abayintloko, abangamabhinqa kwizibhalo zabo zedrama zelwimi lwesiXhosa. Apha kuzobe kujongwe ingakumbi ababhali abasini sobuduna, ngenjongo yokuveza umba wokuba ababhali besini sobukhomokazi babazoba abalinganiswa ababhinqileyo nje ngabantu abangenamiqolo okuzimela ngaphandle kokuba kubekho indoda obomini babo. Aba babhali babazoba abalinganiswa ababhiqileyo phansti kwala ngcamango yokuba, apho umntu obhinqileyo ekumela afumaneke khona kusezimbizeni apho baphekela usapho lwabo rhoqo, ekucoceni umzi nasekukhuliseni abantwana, hayi enye into engaphaya koko. Ngoko ke eli phepha libhalwe ngenjongo yokuphelisa oku dodobalisa loo ngcamango. Baninzi kea bantu abaphikisana nale ndlela yaphotho lwamabhinqa ngamadoda abo, nangamanye amadoda nje jikilele, eli phepha lizobe lingqinelana nolo ninzi lwabantu abathi loo mpatho mbi yamabhinqa mayiphele, kuvezwe imeko yokuba kukho ulingano phakathi kwamabhinqa kunye nababt abasini sobukhomakazi. Int ethetha ukuba eli phepha lizakuti ligqithele lijonge kwaye liveze indlela apho kungati kuekho ulingwano phathi kwezini zimbini, nendlela apho uwonke wonke angakwazi ukuphila ngentlonipho omnye komnye kungekho zimpatho mbi, okanye sini sinesikhundla esiphakamileyo kunesinye.
Uphicotho-nzulu ngokusetyenziswa kolwimi ngababhali bezini ezahlukeneyo kwiincwadi zesixhosa ezikhethiweyo
- Fali, Nompumelelo Winnifred
Authors: Fali, Nompumelelo Winnifred
Subjects: Xhosa language -- Usage , Gender identity in literature , Xhosa literature -- Research
Identifier: http://hdl.handle.net/10948/29871 , vital:30787
Description: Uphando luza kugxininisa kwindlela yokusetyenziswa kolwimi ngababhali bezini ezahlukeneyo. Ulwazi olukhoyo kolu phando lujolise ekuphandeni, uphicotho–nzulu kuphononongwa iincwadi zesiXhosa ezikhethiweyo. Phambi kokuba kujongwe okuqulathiweyo ngababhali bezini kufuneka kujongwe kuqwalaselwe indlela ababhali abasebenzisa ngayo ulwimi. Kuza kujongwa nendlela ababazoba ngayo abalinganiswa kuncwadi ingakumbi ababhali abangamadoda, kuba kubalulekile kujongwe indlela abazotywa ngayo kwakunye nolwimi ukuze kube lula ukuqonda indlela olwakhiwe ngayo uphando. Ngokutsho kukaStralton, (1990:98) abalinganiswa basetyhini bakhiwa ngeendlela ezininzi maxa wambi babizwa ngendlela apho eneengcinga ezineentetho ezisoloko zisetyenziswa ezingalunganga, kwanokungalingani kwezini kuba yingxaki esoloko ikho amaxesha amaninzi. Uqhubeka athi abalinganiswa basetyhini bazotywe njengoomama ababopheleleke emakhaya, kodwa benoxanduva lokujonga amakhaya, abantwana, abayeni kwanabantu bomzi. Indawo yabasetyhini ibonwa njengeyokuba isekhitshini apho soloko besebenza khona. Uphinda oleke ngelithi ababhali abangamadoda batyibela abalinganiswa basetyhini njengabantu abangathembekanga ekwenzeni okulungileyo kwanokutyhefa okanye ukungcolisa uluntu entlalweni. ULeslie (1987:05) ucacisa banzi ngabantu basetyhini athi bangabalinganiswa abazotywa kubhalo-ncwadi njengabantu abamele “oomama abaswiti” abavuma yonke into engavumelekanga okanye engathandekiyo kwaye ngabantu abazinikelayo bancame ubom babo. Esi siqu sika“mama” uLeslie (1987:15) uthetha ngaso ehlanganisa “umama waseAfrika” onobuhle ngaphakathi nangaphandle ukwakhiwa kwakunye nokuhlaziyeka kwakhe. Isiqu esihle, uyaphinda-phinda ukuthi, abasetyhini banomonde kwakunye nothando olunovakalelo, indlela ebonakalisa ubunjani babo. Abalinganiswa abaninzi basetyhini bamiswa ziingcinga neentetho ezisoloko zisetyenziswa zezini ukwenzela imigudu nemizamo yabo yokwenyuka itsalelwe ezantsi kubekho imibuzo engenampendulo.